Mareegaha Caalamiga ah, oo la shaqeeya dgn - Geofumadas
Sebtember, 2009 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Akhrinta qaabka dgn waa caadiyan barnaamijyada GIS / CAD, laakiin dhowr ka mid ah kuwan (oo ay ku jiraan Manifold GIS iyo gvSIG) ayaa akhriyay qaabka V7. AutoCAD iyo ArcGIS horayba u gaadhay.
Aynu aragno sida ay u sameeyaan Khariidadda Caalamiga ah:
Si xiiso leh, faylasha waxay ku jiri karaan .tar, .zip, ama .tgz.
Marka la soo xushay, barnaamijku wuxuu ka codsanayaa waxa la saadaalinayo iyaga. Kuwani waxaa laga dooran karaa liis ballaaran, ama faylka .prg, ama a .txt kaas oo ku jira. (Ma aqoonsanaayo qiyaasta gudaha ee loo xilsaaray Microtation Geographics)
Kadib waxaad ku qeexi kartaa inaad ku qoondeeysid isku midka ah dhammaan faylasha la soo xulay. Waxa kale oo aad abuuri kartaa qiyaasta dhadhanka iyo badbaadinta sida .prj si aad u wacato wakhti kasta. Waxa kale oo xiiso leh in marka aad dib u furto fayl aan la saadaalin Karin, waxay ku kaydisaa ugu dambeeya ee loo xilsaaray ... ohhh haa kala cayncayn ah Fiiri sifooyinkaan fudud
Qoraalada ugu dambeeyay, waxa ay akhrineysaa V8, barnaamijyada ka sarreeya sida Manifold GIS iyo gvSIG, iyadoo baahida loo qabo qaabkan oo ay ku jirto kaliya kuwan ka mid ah kuwa soo saarey Microstation.
Qoraallada ayaa u muuqda walxo dhibcood, sidaas darteed waxay leeyihiin dhibicda qadka hoose ee bidix. Waad sameeyn kartaa shayga, waad taaban kartaa oo tirtiri kartaa ama xayeysiin kartaa, laakiin kaliya heerka aragtida.
Waa arrin dhib badan oo ka mid ah soo dejinta, waa haddii haddii shaygu cad yahay oo midabkuna uu yahay midab isku mid ah waxay u muuqan doontaa inaysan jirin. Si arrintan loo sameeyo, waa inaad gashaa midab aan caadi aheyn, tan waxaa lagu sameeyaa "aragtida> midabka dib u rogrogasho ..."
2. Ku dhoofinta dgn
Dhoofintu maaha mid xun, waxay soo diri doontaa waxa muuqda ee ku jira buugga "Xarunta Xakamaynta", taas oo ah hab loo waco hay'adda aragtida. Wax walboo isku mid ah ayaa ku dhici doona.
Ka mid ah cidhiidhiga ugu badan, size ee qoraallada. Si aad tan u samayso, weydiiso inaad doorato cabbir iyo inaad isku daydo. Haddii ay dhacdo calaamadaha shaxanka, waxay noqdaan qoraalo ay ku qoran yihiin cabbirka muuqda.
Waxay abuureysaa 3D dgn haddii khariidadu ay hayso xog sare; kadibna ka baxso ikhtiyaarka si markaas alaabta caddaanka ah loo arki karo madow ama ka baxsan sida ku xusan asalka.
Waxay sidoo kale u ogolaataa dhoofinta on matrix, aad u fiican faylasha aad u weyn. Tani waxay ka dhigaysaa faylal gooni ah oo taga, iyo kuwa ugu fiican, waxay kuu oggolaaneysaa inaad dirto shabakad tixraac ah, oo laga yaabo inay ku jirto joornaalada juquraafi (enlem / longitude) ama UTM.
Dhoofinta waxay dhibaato ku yeelan doontaa walxaha adag, sida muuqaalka qaababka leh godadka, maaddaama Microstation ilaa V8.5 qaybahaas ayaa weli ahmiyad u leh muraayadaha dhejiska ama unugyada.
3. Ikhtiyaar dheeraad ah
Waxaa xusid mudan in qaababka dheeraadka ah ee aad ku qeexi kartaan marka ay soo dejinayaan unugyada (unugyada, ama blockska) qodobbada; haddii aysan ahayn, ka faa'iideysashada iyaga oo ujeedooyin leh.
Waxa kale oo suurtogal ah in la qeexo in lambarka midabka loo qori karo astaamo miiska, kaas oo u oggolaanaya mawduucyada qaabkan.
Gebogabadii, dhexdhexaad ah waa la aqbali In kastoo Khariidadda Caalamiga ah waxyaabo badan oo badan
Dgn GvSIG OS GIS kala cayncayn ah
Post Previous«Previous Isku Dayay 2009 Finalka
Post Next Maktabadda Digital DigitalNext »
5 Jawaab "Global Mapper, la shaqeynta dgn"
Waxaan haystaa geoserver ah marka ay muujineyso lakabka si fiican u sameeynin, waxaan ku ridaa xariijinta qaabka laakiin waxay u muuqataa sida dhibco. Waxyaabaha qarsoodiga ah waa in aragtida hore ay muujiso ganaax. Goobjooge ayaan ku leeyahay mashiinka iyo marka ay muujinayso lakabka ku yaal qunsulada caleemaha dabaasha:
Xuddunta ayaa ka baxsan xuduudda la oggol yahay.
Mar labaad waad ku mahadsan tahay caddeyntaada. Waa wax laga xumaado in la ogaado xaqiiqdaas.
Waxaan la xiriirnay Isbahaysiga Furfuran ee furan, laakiin ma shaqeynayo mashruucyo furan. Kaalay, in aqoonta sii dayntu aanay fogeyn.
Iyo sida Bentley, waxaan codsi u sameynay qeexitaanadan dhowr jeer ... waxan sugeynaa wax nooga yimaado.
Waad ku mahadsantahay inaad caddaynayso Alvaro.
Iyo waxa ikhtiyaarrada ah ee jira Alliance Design Alliance ?
Sida laga soo xigtay boggan Bentley, waxaa suurtagal ah in la helo qaar ka mid ah helitaanka dokumentiyada ku saabsan qaabka dgn v8.
“Waxaan abuurnay dukumenti qeexaya qaabka faylka DGN ee asal ahaan loo adeegsaday jiilka V8 ee alaabada. Qaabkan faylka ah waxaa mararka qaar loo yaqaanaa qaabka 'V8 DGN'. Waxyaabaha ku jira dukumintiga caddaynta ee V8 DGN ayaa ku filan si loogu oggolaado barnaamij barnaamij xirfad leh inuu u tarjunto xogta gudaha faylka V8 DGN ee MicroStation abuurto iyo socodsiiso. »
Akhrinta DGN ama qaab kale oo lahaansho ah, sida DWG, maahan helitaan ama maheyn. Waa qaabab xidhan, oo aan lahayn tilmaamo furan, sidaa darteed dariiqa kaliya ee lagu heli karo barnaamij ganacsi oo lagu aqristo (iyo / ama wax lagu qoro) ayaa ah in la gaaro heshiis (dhaqaale) heshiis ah guriga ganacsiga ee waajibka ku ah. Laga soo bilaabo softiweerka bilaashka ah, waxa keliya ee la sameyn karaa waa injineerrada dib-u-noqoshada, oo aad qaali u ah taas oo aan dammaanad ka qaadaynin natiijooyin wanaagsan. In gvSIG waxaan ka akhrinay, tusaale ahaan, DWG 2004, wax aan barnaamij kale oo bilaash ah lagu helin, laakiin dadaalka la maalgaliyay ayaa aad u ballaaran.
Maxay tahay in kor loo qaado dhammaan meelaha waa isticmaalka qaabab furan, sida GML, oo ​​si tartiib tartiib ah u isticmaasho qaababka xiran, isbeddelka sanadba sannadka, iyo ujeeddadooda kali ah inay ilaaliso xakamaynta suuqa.